တရုတ် Handheld ဦး colander Silicon စစ်အောင်မီးဖိုချောင်ပြိုကျ | Melikey စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Melikey
silicone ကျွေးမွေး Bottle သ
OEM / လိမ္မော်ရောင်စီမံကိန်း
Houseware & မီးဖိုချောင်သုံးထုတ်ကုန်များ
silicone Stretch အဖုံး
silicone နေ့လည်စာ Box ကို
silicone Fried ဥမှို
silicone Bottle သ
silicone ပေ Bowl
လက်ကိုင်ဦး colander Silicon စစ်အောင်မီးဖိုချောင်ပြိုကျ | Melikey
ပစ္စည်း: Silicon, PP + TPR
feature: Eco-Friendly, ခြံ, Stock
အမည်: ကိုင်တွယ်နှင့်အတူဦး colander
အရောင်:2အရောင်များ
Size: 13.6 * 7.9 လက်မ
FOB စျေးနှုန်း: USD0.04-USD2.5 / အပိုင်းအစ
ပစ္စည်း: FDA ကဆီလီကွန်အတည်ပြု
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 5000000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ကိုင်တွယ်နှင့်အတူမီးဖိုချောင်ပြိုကျဦး colander, အာကာသ-Saver ခေါက်ရေစစ်အောင်ဦး colander,2ကွတ်ထုတ်ယူ၏စွမ်းဆောင်ရည်
silicone ဦး colander အားသာချက်
စိတျထဲမှာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အတူဒီဇိုင်း, သူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအန္တရာယ်ကင်းပါလိမ့်မည်, နှင့်အဆင်ပြေလက်ကိုင်ပင်ပိုမိုအဆင်ပြေမီးဖိုချောင်ထဲမှာသင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ခေါက်လိုက်တဲ့အခါအဲဒီ ဦး colander ့မီးဖိုချောင်အံဆွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီရိုထဲမှာသူတို့ကိုသိမ်းထားဖို့ကအလွန်လွယ်ကူအောင်, သာ 1.6 "အရပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်ကြသည်။
ပစ္စည်း silicone, PP + TPR
လက္ခဏာ Eco-Friendly, ခြံ, Stock
အမည် ကိုင်တွယ်နှင့်အတူဦး colander
အရောင်2အရောင်များ
အရွယ် * 7.9 လက်မ 13.6
ကိုင်တွယ်နှင့်အတူဦး colander ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ကိုင်တွယ်နှင့်အတူဦး colander ၏ Size ကို
ခေါက်ဦး colander squish
ကိုင်တွယ်နှင့်အတူဦး colander ၏အရောင်
ကိုင်တွယ်နှင့်အတူဦး colander ၏လျှောက်လွှာ
ယခင်: သိုလှောင်ခြင်းတောင်းမီးဖိုချောင်စစ်အောင်ပြိုကျ Silicon | Melikey
နောက်တစ်ခု: silicone စားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်အိတ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် Ziplock အိတ် | Melikey
1. သင့်ရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
ကျနော်တို့စက်ရုံလက္ကားများမှာဆီလီကွန်ပုတီးများအတွက် MOQ အရောင်နှုန်းကို 100 PCs နှင့်ဆီလီကွန် teether နှင့် teething လည်ဆွဲများအတွက်အရောင်လျှင် 10 PCs ဖြစ်ပါတယ်။
2.How ငါနမူနာ get သလဲ?
ကက်တလောက်ရနှငျ့သငျနမူနာများအတွက်လိုအပ်ရာကို item နှင့်အရောင်အတည်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အနမူနာရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရေကြောင်းအခကြေးငွေစီစဉ်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့တနေ့အတွင်းထွက်စလှေတျတျောနမူနာရပါလိမ့်မယ်!
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်များအဘို့အထုံးစံအမိန့်ကြိုဆိုပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျရုပျပုံမြားနှငျ့ demension ပေးလျှင်သင်တို့အဘို့အဆွဲစေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာရှိသည်။
အကြှနျုပျ၏ဥစ်စာတင်ပို့ခဲ့ကြပါလျှင် 5. ငါဘယ်လိုသိနိုင်သနည်း
6. သငျသညျ MOQ ရှိပါသလား
ဟုတ်ပါတယ်။ နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်ပုတီးများအတွက်အရောင်များနှုန်း 100pcs ဖြစ်ပါတယ်။ teethers များအတွက်အရောင်များနှုန်း 10pcs ။ လည်ဆွဲအဘို့အအရောင်များနှုန်း 10pcs ။
foldable ဦး colander
ဦး colander ခေါက်
အဆိုပါစုပ်ဦး colander ကျော်
ဆီလီကွန်ဦး colander စစ်အောင်
ဆီလီကွန်ဇွန်း, ဦး colander ခေါက်ရေစစ်အောင်, သိုလှောင်ခြင်းတောင်း
သိုလှောင်ခြင်းတောင်းမီးဖိုချောင်စစ်အောင်ပြိုကျ Si ...
ခေါက်ဦး colander မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်စစ်အောင် | ငါ့ကို ...
လိပ်စာ: အမှတ် 1, Xinli လမ်း, Chanjing, Xinxu မြို့, Huiyang ခရိုင်, Huizhou, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, CN
4 လအရွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး teether , ရော်ဘာ teether, ချစ်စရာအံသွားကစားစရာ, ဆီလီကွန်ကလေး teether , ဆီလီကွန် teether , သဘာဝအသွားများ,